Audacity 2.4.2 inouya new wxWidgets raibhurari uye kugadzirisa bug | Linux Vakapindwa muropa
Mushure mekuomarara yekutanga vhezheni, kubvisa kwako uye a yekutanga kugadzirisa kuburitsa kugadzirisa matambudziko eiyo yekutanga kuburitswa, zvinoita sekunge zvese zvadzokera kune zvakajairika mu Audacity Team. Izvi zvinoreva kuti ivo vari kutoburitsa vhezheni ine mashoma mashoma anozivikanwa maficha, uye kuti mazhinji acho ane chekuita nekugadziriswa kwebug uye kugadzirisa kwekuita. Ndizvo chaizvo izvo Audacity 2.4.2 , que Yakaburitswa mukati mevhiki ino.
Kunyangwe Audacity 2.4.2 ichigadzirisawo mabugs, chikonzero chekuburitswa kutsva ndechekuti wagadzirisa wxWidgets raibhurari iyo inoshandisa software kubva ku v3.1.1 kusvika ku v3.1.3, ine zvigamba izvo timu imwechete yakagadzira nekushandisa. Ivo vaida kuita shanduko iyi izvozvi, vasati vatanga kufunga nezve chakaomarara kuvhurwa icho chinofanira kusvika mumwedzi mishoma inotevera. Ivo vatorawo kunyura nekuti vazhinji vashandisi veLinux vakashuma vachirovera neWxWidgets.
Audacity 2.4.2 inovandudza rutsigiro rwewxWidgets paLinux, kunyanya
Shanduko huru kubvira 2.4.1 ndeyekuti isu takagadzirisa raibhurari yewxWidgets iyo Audacity inoshandisa kubva ku3.1.1 (ine zvigamba kubva kwatiri) kuenda ku3.1.3 (ine zvigamba kubva kwatiri). Isu taida kuita izvi sedanda mune rayo chairo, tisati tatanga neyakareba, yakaoma kunzwisisa.
Kana iwe uri kushandisa Audacity 2.4.2 paLinux, shandisa iyo chaiyo wxWidgets raibhurari. Munguva yakapfuura taive nemishumo mizhinji yematambudziko eLinux ayo aive ekupedzisira nekuda kwekumwe kugoverwa vachishandisa system wxWidgets (3.0.0) ine Audacity.
Kana zvasvika pakugadziriswa kwe bug, timu inoti ivo vakagadzirisa huwandu hwe 41 bugs, asi iyo chaiyo nhamba inoenderana nekuti tinoiverenga sei. Kune rimwe divi, ivo vakasanganisira basa idzva: iro kumisikidza reset. Zvino, mune iyo Menyu menyu pane chinhu chekudzoreredza iyo iyo, kana yasarudzwa, inogadzirisazve akawanda masisitimu kuitira kuti vadzokere kune yakasarudzika tsika.
Audacity 2.4.2 yave kuwanikwa yeWindows, macOS uye Linux kubva kune anovandudza webhusaiti, iyo iwe yaunogona kuwana nekudzvanya Iyi link. Iyo Flatpak vhezheni (bato rakananga) yakagadziridzwa, asi iyo snap packageKwete yeshanduko, kwete (uyezve Canonical ichashamisika kuti takasarudza Flatpaks). Kana iwe uchida kuimisa kubva ku APT repository, unogona kuzviita nekuvhura terminal uye typing iyi mirairo:
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Multimedia » Audacity 2.4.2 inouya neakagadziridzwa wxWidgets raibhurari uye kugadzirisa akasiyana mabugs
MuLLVM vanorongawo kujoina chirongwa chekubvisa mazwi "muranda nashe"
Mhosva dzakapomerwa Julian Assange dzakawedzera